Malaayiin dad ah ayaa halkaa ku qarash garey lacag aad u badan agab looga hortago gabowga Niklorinamide Riboside chloride. In kasta oo gabowgu yahay hannaan dabiici ah, haddana dadku ma doonayaan inay gaboobaan. Akhbaarta wanaagsan ayaa ah, in ay jiraan wax soo saar badan oo halkaa yaala oo laga yaabo inay runtii gacan ka gaystaan ​​tan oo Nikotinamide Riboside Chloride ay ka mid tahay. Qormadan, waxaan diirada saari doonaa sheyga.
Waxaan ku siin doonaa macluumaad ku saabsan waxa ku saabsan, sida ay u shaqeyso, faa'iidooyinkeeda, halka laga iibsado, iyo talooyin dheeri ah oo kaa caawinaya inaad sida ugu wanaagsan wax uga faa’iideysato.
Marka, aan ku bilowno su'aasha ugu muhiimsan. Ha iloobin magaca weyn iyo murugsan. Nicotinamide Riboside Chloride CAS 23111-00-4 runtii waa qaab kale oo loo yaqaan 'Vitamin B3', oo badanaa loo yaqaan niacin. Nikotinamide Riboside Chloride sidoo kale waxaa loogu yeeri karaa niagen ama gaabiyey sidii NR. Marka jirka lagu mudo, waxaa loo rogayaa galay Nicotinamide adenine dinucleotide ama NAD +. NAD + waa mid ka mid ah enzymesyada ugu muhiimsan cilmiga jir ahaaneed ee aadanaha.
Waxay mas'uul ka tahay shidaalka dhowr habraacyo bayooloji oo muhiim ah oo ay ku jiraan u beddelashada cuntada xagga tamarta iyo xoojinta nidaamyada difaaca ee laga helo unug kasta. Enzyme-ku wuxuu kaloo noqon karaa mid muhiim u ah hagaajinta DNA-ga burburay wuxuuna saameyn saa'id ah oo dheeraad ah ku yeelan karaa kobcinta da'da caafimaad qabka. Jirka ayaa si sahlan u soo saari kara enzyme-ka NAD + iyada oo aan la kordhin. Qaybta murugada leh ayaa ah, inta aad sii gaarto da'da, qadarka NAD + ee uu soo saaray jirku hoos ayuu u dhacayaa.
Asal ahaan, dadka da'da ah waxay lahaan doonaan heerar hoose ee enzyme-kaan muhiimka ah marka loo barbar dhigo kuwa da'da yar. Tani waa halka ay kabitaanku aad muhiim ugu tahay. Isticmaalka supplements-ka loo yaqaan 'Nikotinamide Riboside Chloride' si kor loogu qaado heerarka NAD +, gaar ahaan dadka da'da ah, ayaa laga yaabaa inay bixiyaan tiro ka mid ah faa'iidooyinka cajiibka ah.
Marka ugu horeysa, heerarka hoos u dhaca ee NAD + ayaa loo barbardhigay cudurrada da'da ee la xiriira ee ay ka mid yihiin sonkorowga, Alzheimer, wadne joogsi, iyo lumis aragga. Waxa kale oo jira caddeyn muujineysa in kor u kaca NAD + uu beddeli karo calaamadaha gabowga. Ugu dambeyntiina, isticmaalka Nikotinamide Riboside chloride kaamil ah kaliya kama caawinayso inaad u ekaato dhalinyaro da 'yar oo kalsooni badan. Waxay kaloo kaa caawineysaa yareynta halista suurtagalka ah ee cudurada daba-dheeraada markaad sii weynaato.
Sidee ayuu Nikotinamide Riboside Chloride u shaqeeyaa?
Ujeedada ugu weyn ee Nikotinamide Riboside chloride vs niacin waa in sare loogu qaado heerarka NAD + jirka. NR waa fiitamiin laga helo raadad aad u yar oo kujira cuntadeena caadiga ah. Marka walaxda la dubo, waxaa loo rogi doonaa hab-socodyada dheef-shiid kiimikaadka caadiga ah loo yaqaan 'NAD +. Maxaa ka dhigaya NR ikhtiyaar wanaagsan oo loogu talagalay dadka raadinaya inay kordhiyaan heerarka NAD + waa xaqiiqda inay si aad ah u bayaan tahay.
Sidaan kor ku soo sheegnay, NR waa nooc Fiitamiin B3 ah. Waxaa jira daraasiin ilo ah oo cuntada ka baxsan oo keeni kara Vitamin B3. Si kastaba ha noqotee, xaddiga Nikotinamide Riboside Chloride ee jirka lagu nuugo si dhakhso badan marka loo eego qaababka kale ee B3 ee cuntada. Tani waxay ka dhigeysaa mid ka mid ah hababka ugu kalsoonida badan uguna waxtarka leh ee kabidda loogu talagalay NAD + jirka aadanaha.
Nicotinamide Riboside Chloride Faa'iidooyinka / Saamaynta
Faa'iidooyinka Nikotinamide Riboside Chloride waxaa kaliya oo la arki karaa oo keliya marka loo eego doorka NAD + uu ku ciyaaro jirka.
Tani waa sababta oo ah kordhinta NR waxay sare u qaadi doontaa heerarka NAD + taa bedelkeedana 'coenzyme' muhiim ah ayaa bixin doonta waxyaabaha soo socda Faa'iidooyinka Nicotinamide Riboside Chloride:
1. Da 'caafimaad leh
Soo-saarka kordha ee "NAD + ee jirka ayaa kicin kara soo-saarista enzymes-ka qaarkood oo laga yaabo inay gacan ka gaysato kor u qaadida da'da caafimaadka leh iyo nimcaysan. Daraasadaha xayawaanka, coenzyme waxay ku guuleysatay inay kiciso soo saarista enzyme loo yaqaan 'sirtuins'.
Sirtuins waxay u muuqatay inay wanaajiso nolosha iyo caafimaadka guud ee maaddooyinka imtixaanka xayawaanka inta lagu jiro daraasadaha kiliinikada. Daraasadaha kale ayaa sidoo kale muujinaya in Sirtuins ay gacan ka geysan karto kor u qaadida adkeysiga walaaca ee bini'aadamka iyo sidoo kale hagaajinta DNA-da burburka sidoo kale.
2. Hagaajinta farsamada Difaaca unugyada ee Maskaxda
NAD + waxay kaloo ka ilaalin kartaa unugyada maskaxda inay xumaadaan, gaar ahaan gabowga. Daraasadaha qaar ayaa muujinaya in NAD + ay xakameyn karto soo-saarka borotiinka loo yaqaan PGC-1-alpha. Borotiinku wuxuu si weyn muhiim ugu yahay kahortagga unugyada ka hortagga walaaca sunta. Waxay kale oo ay hagaajin kartaa oo ay hagaajin kartaa howlaha mitochondrial ee unugyada maskaxda, taasoo horseedaysa caafimaad wanaagsan xagga garashada.
Waxa kale oo jira daraasiin daraasado cilmi baaris ah oo laxiriira culeyska maskaxda iyo shaqooyinka mitochondrial ee dhaawacma ee ku dhaca unugyada maskaxda ee leh cilado maskaxda la xiriira sida Alzheimer, Parkinson's iyo kuwa kale. Tallaabada NAD + ee ku saabsan yareynta nidaamyadan ayaa si weyn hoos ugu dhigi karta halista Alzheimer's iyo cudurada kale ee maskaxda ee xumaada.
Waxtarka NAD + runtiina waa mid aad u sareysa. Daraasadaha xayawaannada qaarkood halkaas oo jiirarka Alzheimer lagu daaweeyey Nicotinamide Riboside Chloride, heerarka PGC-1-alpha ee maskaxda ayaa kordhay inta u dhaxaysa 50 iyo 70%. Dhamaadka daraasadaha, jiirarka lagu daaweeyey NR waxay muujiyeen horumar weyn xagga howlaha xusuusta leh.
3. Nicotinamide Riboside Chloride Waxaa laga yaabaa inay kaa caawiso dhibaatooyinka wadnaha
Khatarta ah inuu wadne joogsiga si weyn u kordho marka aad gabowdo. Wadne joogsiga sidoo kale waa arin aad u caadi ah runtiina waa sababta koowaad ee dhimashada aduunka. Guud ahaan caafimaadka wadnaha wuxuu kuxiran yahay arrimo badan in kastoo ay kujirto cunnooyin sax ah iyo jimicsi. Laakiin waxaa jira waxyaabo qaarkood oo yareyn kara halista. Soo-saarka kordhay ee NAD + ayaa ka mid ah waxyaabahaas.
Daraasado baaritaan ah oo lagu sameeyay xoolaha ayaa lagu ogaadey in kordhinta wax soo saarka NAD + ay gacan ka gaysatey in laga weeciyo isbadalada halista ah ee halbowlayaasha dhiiga oo ay sababaan gabowga. Daraasadaha qaarkood ee ku saleysan aadanaha, heerarka sare ee NAD + waxay u horseedeen yareynta adkaanta adkaanta. NAD + waxaa sidoo kale lagu soo warramey inuu hoos u dhigo halista suurtagalka ah dhiig karka.
Tani waxay si fudud macnaheedu tahay inay jirto suurtogal dhab ah oo loo istcimaali karo Nicotinamide Riboside Chloride sida ugu macquulsan ee lagu yareyn karo halista cudurka wadnaha. Si kastaba ha noqotee, waxaa weli jira baahi loo qabo cilmi-baaris dheeraad ah oo aadanaha si loo fahmo suurtagalnimada.
Ka sokow dheefahaas, Nikotinamide Riboside chloride sidoo kale way caawin kartaa Miisaanka oo luma. Tani waa sababta oo ah heerarka sare ee NAD + ayaa sare u qaadi kara heerka dheef-shiid kiimikaadka jirka. Heerarka NAD + sare ayaa sidoo kale ka hortagaya burburka DNA iyo walaaca 'oxidative stress', laba arrimood oo lala xiriiriyay kansarka. Coenzyme sidoo kale waxay lahaan kartaa saameyn wanaagsan koritaanka koritaanka murqaha caafimaadka sidoo kale.
Sida loo isticmaalo Nikotinamide Riboside Chloride
Nicotinamide Riboside Chloride waxaa badanaa loo iibiyaa niagen. Shayga waxaa lagu iibiyaa kaabsooshaha khadka tooska ah ee internetka waxaana lagu buuxiyaa afka.
In kasta oo inbadan oo ka mid ah waxsoosaarka niagen ay ka kooban yihiin kaliya Nikotinamide Riboside Chloride, qaar ayaa waliba laga yaabaa inay muujiyaan waxyaabo dheeraad ah oo ay ka mid yihiin polyphenol ama Pterostilbene. Soo-saareyaashu badanaa waxay ku talinayaan qiyaasta chloride-ka Nikotinamide Riboside oo u dhexeeya 250 mgs iyo 300 mgs maalintii. Tani waxay qiyaas ahaan la mid tahay laba kaabsal oo shey ah maalin walba.
Nicotinamide Riboside Chloride iyo Nicotinamide Riboside (NR)
Farqiga u dhexeeya labadan maado waa sameynta. Si kastaba ha noqotee, waxay leeyihiin ku dhawaad ​​qaab farsamo oo shaqeynaya. Shaqada labadaba Nicotinamide Riboside Chloride iyo Nicotinamide Riboside waa in kor loo qaado wax soo saarka NAD + jirka. Labada sidoo kale waa qaabab kale oo loo yaqaan 'Vitamin B3'.
Doodda Nikotinamide Riboside chloride vs NMN ma aha mid aad u weyn. Nicotinamide Mononucleotide (NMN), sida Nicotinamide Riboside Chloride, waa aasaaska loo yaqaan niacin. Labada maado sidoo kale waa isku mid habka ay u shaqeeyaan. Waa la suuxiyaa oo loo beddelaa NAD + markay galaan jidhka bini aadamka. Intaa waxaa sii dheer, labadaba walxahaas waxaa sidoo kale laga sameeyay iskudhafan ribose iyo Nicotinamide.
Waa maxay Cunnooyinka ay kujiraan Nikotinamide Riboside?
Cunnadeenna badankood waxay ka kooban tahay xaddi aad u yar oo ah Nicotinamide Riboside. Si kastaba ha noqotee, dadka intooda ugu badan, cunto iskucelcelis ah, oo ay badan yihiin fiitamiin B3, waa inay ku filnaadaan bixinta bixinta loo baahan yahay ee Nikotinamide Riboside.
Waa kuwan cuntooyin badan oo laga yaabo inay kaa caawiyaan tan:
Caano caano- Caanaha lo'da ayaa soo raaca waxyaabo badan oo Nicotinamide Riboside ah.
Fish- Waxaad sidoo kale NR ka heli kartaa Kalluunka. Tuna, sardines, iyo salmon dhammaantood waxay leeyihiin heerar aad u wanaagsan oo ah Nicotinamide Riboside.
Beer- Waxaa la yaab leh, biirku wuxuu kaloo kaa caawin karaa inaad ku darto Nicotinamide Riboside. Tani waa sababta oo ah biirka wuxuu leeyahay khamiir sida mid ka mid ah maaddooyinka ugu muhiimsan iyo khamiirka waxaa loo yaqaanaa inuu aad ugu sarreeyo NR.
Chicken- Cunista digaagga ayaa sidoo kale kor u qaadi karta heerarka NR ee jirkaaga sidoo kale. Qaadasho digaag ah, la dubay, la shiilay, ama la kariyey, waxay ka kooban tahay ilaa 9.1 milligram oo ah Nicotinamide Riboside.
Khudaarta cagaaran- Khudaarta cagaaran sidoo kale waa lagugula talin karaa. Waxay ku raran yihiin culeysyo fiitamiino ah, oo ay ku jiraan B3-kasta oo muhiim ah oo muhiim u noqon doona isku-darka NAD + ee jirkaaga.
khamiirka - Ugu dambeyntiina, haddii aadan awoodin inaad ka hesho Nicotinamide Riboside ku filan biirka, waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad khamiirka si gooni ah u liqdo. Khamiirku aad ayuu ugu sarreeyaa Nicotinamide Riboside waana in lagu daro cuntadaada.
Nikota Nikotinamide Riboside chloride badan waa badbaado aad u aamin badan in la isticmaalo laakiin sida badeecad kasta, waxay leedahay waxyeelo dhawr ah oo ay tahay inaad ogaato. Daraasadaha qaar ee bini aadamka, maaddooyinka imtixaanka waxaa lasiiyay inta u dhaxaysa 1000 milligram iyo 2000 milligram oo Nikotinamide Riboside Chloride mana aysan arag wax waxyeelo ah haba yaraatee. Ilaa hadda, soosaarayaasha Nicotinamide Riboside Chloride waxay kugula talinayaan inta u dhaxaysa 200 mg iyo 300 mgs oo sheyga maalintii ah.
In kasta oo diiwaangelinta badbaadada this, Nikotinamide Riboside Chloride laga yaabo inay leedahay waxyeelo dhawr ah oo maskaxda lagu hayo. Marka hore, dadka qaar ayaa soo sheegay inay dareemayaan lallabbo kadib markii la isticmaalayo sheyga. Xaaladaha kale, bukaanku waxay dareemeen daal iyo madax xanuun ka dhashay Nicotinamide Riboside Chloride. Sidoo kale maahan wax aan caadi ahayn in la arko arrimaha dheefshiidka oo ay ku jiraan calool xanuun iyo shuban.
Si kastaba ha noqotee, darnaanta darbiyada 'Nikotinamide Riboside chloride side' ayaa aad uga duwan shaqsiyaadka mid kale. Dadka qaarkiis xitaa ma la kulmaan saameyntoodan gabi ahaanba. Haddii aad qaadatid dawooyin kale, kala hadal takhtarkaaga kahor intaadan isticmaalin Nicotinamide Riboside Chloride.
Kasoo iibso Nikotinamide Riboside Chloride Online
Haddii aad dareento in Nicotinamide Riboside Chloride ay kuu fidin karto xoogaa faa'iidooyin yaab leh guud ahaan caafimaadkaaga, ka dib waad ku farxi doontaa inaad ogaato in sheyga laga heli karo dukaanno badan. Waxaad sidoo kale ka iibsan kartaa khadka tooska ah ama khadka tooska ah. Nicotinamide Riboside Chloride waxaa badanaa loo iibiyaa niacin. Waxay ku timaaddaa kaabsal sidoo kale.
Si kastaba ha noqotee, waxaad u baahan kartaa inaad waqtigaaga qaadatid maadaama aad raadineyso iibsade. In kasta oo ay jiraan iibiyayaal badan oo kuu soo bandhigi doona badeecad tayo leh, weli waxaa jira tiro badan oo bogag been abuur ah oo keliya oo doonaya inay kaa khayaaniyaan.
Waa kuwan tabaha qaar kaa caawin doona inaad hesho iibiyayaal dhab ah:
Eeg dib u eegista. Had iyo goor waa fikrad fiican in la ogaado waxa ay macaamiisha kale ka sheegaan iibiyaha ka hor intaadan iibsan.
Fiiri qiimaha sidoo kale. In kasta oo Soo iibso Nikotinamide Riboside Chloride aad qaali uma ahan, sidoo kale ma ahan mid rakhiis ah. Ganacsadeyaasha ku iibiya sheyga qiime macquul ah oo macquul ah waa in laga fogaadaa.
Waxay kaloo noqon kartaa fikrad fiican inaad weydiisato talo toos ah. Halkii aad ka boodi lahayd khadka tooska ah ee internetka oo aad iskudaydo inaad hesho Nikotinamide Riboside Chloride supplements, kala hadal qof horay u soo iibsaday badeecadan oo arag haddii ay kugula xiriiri karaan iibiyaha dhabta ah. Dhakhaatiirta sidoo kale waxaa laga yaabaa inay hayaan fikradaha qaarkood meesha laga bilaabayo iyo macluumaad dheeri ah oo ku saabsan chloride Nicotinamide Riboside vs NADH.
Nicotinamide Riboside Chloride waa mid si weyn looga soo horjeedo da'da-duugida. Waxay kaa caawin kartaa dib u soo celinta calaamadaha gabowga waxayna kusiineysaa caafimaad wanaagsan. Tilmaanta kore waa inay kaa caawisaa sidii aad u heli lahayd alaab dhab ah oo halkaas ka jirta.
1.Waa maxay Nikotinamide Riboside Chloride?
2.Sidee u shaqeeyaa Nicotinamide Riboside Chloride?
3.Nicotinamide Riboside Chloride Benefits / Raadka
4.Sidee Loo Isticmaalaa Nicotinamide Riboside Chloride
5.Nicotinamide Riboside Chloride iyo Nicotinamide Riboside (NR)
6.Nicotinamide Riboside Chloride iyo Nicotinamide Mononucleotide (NMN）
7.Waa maxay Cuntooyinka ka kooban Nicotinamide Riboside?
8.Maya Nikotinamide Riboside Chloride Ma Nabdoon tahay?
9.Nicotinamide Riboside Chloride Iibso khadka tooska ah